Hands haddii aad sida weerar argagax dareento waxay bilowdey in ay bilaabaan marka iPhone la socodsiinayaa in aad kaliya haysato rubuc ka mid ah nolosha ka tagay oo waa daqiiqo oo keliya laba qof oo la soo dhaafay duhurkii! Waxaad yaabiyay ee soo noqnoqda Arrintan, maxaa yeelay, waxaad had iyo jeer hubi in aad guriga ka tago la iPhone si buuxda u soo oogay.
Badan oo maxkamad iyo qalad ka dib, waxaan u aqoonsaday vampires batteriga iyo sida ay u dhowraan aad iPhone ee nolosha batteriga.
Top 10 dartood, aad batteriga iPhone waa dheecaan ka soomi
Adeegyada Goobta karti
Waxaa jira badan oo Chine in isticmaala adeegga goobtaada iPhone ee in la ogaado halka aad hadda. Waxay noqon kartaa shaqo nifty u app ah sida "Raadi My iPhone", laakiin barnaamijyadooda ugu runtii ma u baahan doontaa shaqo si fiican u shaqeeyaan - oo dhan samayn doonaa waa duugoobin nolosha aad batteriga iPhone.
Ka murugeeysan dib Mail
Authorising aad iPhone si ay u helaan mail riix qaadan doonaa nolosha ka mid ah aad batteriga iPhone sababtoo ah qalabka si joogto ah ku xiran iyo dhaqanka email bixiyahaaga. Dhaqdhaqaaqa Xogtan qaadataa toll ka soo baxay oo batteriga. Waxyaabaha ku jira xitaa ka sii daran, kuwa isticmaala servers Exchange ay telefoonka.
Apps qabad la'aan hadhay Open
Apple ayaa sheegay in barnaamijyadooda in aan la isticmaalo ama laga baxo tegi doonaa hab hurdo nasinta 10 ilbiriqsi ka dib. Si kastaba ha ahaatee, Chine oo dhan ma waxaa loo sameeyay in ay maamulaan ee hufnaan la mid ah. App dhibaato A xajiya ku hartay iyo howleheedii ee asalka ah oo aan garanayn u daadi doonaa iPhone ee batteriga.
iPhone Screen dhalaalka
The ifaya aad screen iPhone yahay, nolosha more batari u nuugaan doonaa. Tani waxay sidoo kale waa run marka aad leedahay "Auto-dhalaalka" gagadin. Sug, muujinta ah waa inay caawiyaan batari badbaadiyo, sax? Illaa iyo xad, haa. Si kastaba ha ahaatee, marka "Auto-dhalaalka" waa karti, ka iPhone ee shidma light waxaa si joogto ah ka baaraandegidda heerka dhalaalka laga yaabaa in aad u baahan tahay.
Iyadoo mid ka mid ma qiran lahaa updates wax soo saarka ay xun yihiin, waa kaliya xaqiiqo dhab ah oo ka mid ah nolosha. Waxaa jira dhowr updates macruufka ay og in daadi ah iPhone ee batari ay sabab u tahay barnaamijyada xun ama incompatibility la hardware ah.
Background carar App Refresh
Ka fikir ah ee aad iPhone sida Santa ee workshop. Hadda, qabaa oo ka mid ah barnaamijyada yar socda sida laatiinta Santa ee - kuwaas waa kuwa ku hayaa wax socda sida aad u rabto in aad. Si kastaba ha ahaatee, sida fadhiga waxbarasho ka buuxsamay khayraadka, shaqaalaha dheeraad ah oo aad leedahay, si degdeg ah hantida uu baabi'in doono.
Mishiinkan Wallpapers iyo aragtida Zoom
Haa, waxay yihiin quruxsan in ay eegaan - gaar ahaan marka aad u baahan tahay wax i dajiya si loo eego in ay inaga fakadaan off hurdada. Si kastaba ha ahaatee, wallpapers firfircoon u isticmaasho ilaa nolosha batari dheeraad ah sababtoo ah waxay ka sii processor ka graphic iyo accelerometer in isticmaalka waqtiga oo dhan. Isla tagaa marka aad zoom aragti karti - habka baadhitaanka taariikhda ka dhigta waxyeelada 3D qaadataa tamar badan aad fuushay ka soo iPhone.
Helitaanka pings ka barnaamijyadooda aad muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, wargelinta dheeraad ah oo ka dhawaajiso ayaa aad u hesho, si degdeg ah aad iPhone ee batari tegi doonaa.
Haddii aad ogaato in aad iPhone kulul yahay, waxaa jira fursad ay batari waxaa si deg deg ah dheecaan ka soo baxay. Waxaa jira sababo badan sida in sababta iPhone kululaado. Waxaa hubaal ah waa mid ka mid ah labadaan: arrinta software ama kiis iPhone la xannibay kulaylka.
iPhone u rogmatay On waqtiga oo dhan
Waxaad u badan tahay sababta ugu weyn ee aad iPhone waxaa si degdeg ah laga badiyay nolosha. Haddii aadan qaadan karin gacmahaaga u off ka badan daqiiqado yar, oo aad run ahaantii ma filan karto in batteriga socon doonaa maalin!
Hadda oo aad ogtahay sababta aad iPhone ee batari soomi dhinto, waa ay fududahay in ay qaadaan talaabooyin ay dheeraynaysaa ay nolosha. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha aad ku niyad san karaa nolosha batari aad iPhone:
Xaddid Adeegyada Goobta
Save nolosha batari ay yareysey Chine in isticmaali kartaa GPS ku saabsan iPhone. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto oo app isticmaalaa habkaani si aad u cusboonaysiiso meesha aad ag maraya in adeegyada Settings> Privacy> Location . Lahaanshaha adeegyada goobta Jeedsaday oo u barnaamijyadooda sida "Raadi My iPhone" iyo "Maps" waa mid waxtar leh, laakiin dadka kale, waxa deminta badbaadin karo tamar badan iyo in la hubiyo qofna jir ahaan aad dabasocdaa karaa warbaahinta bulshada.
Barkinta keen Feature
Tag Settings> Mail, Xiriirada, iyo Kalandarada> keen New Data> Gacanta si ay u joojiyaan aad iPhone ka si toos ah hubinta casriyeysan cusub ee mail aad, xiriirada, iyo jadwalka. Iyaga updated gacanta Lahaanshaha kaa caawin doona inaad dhowraan badan oo batteriga.
Apps Close aan la isticmaalayn
Dadka intooda ugu badan, marka ay baxdo interface app ee, waxay ka fiirsan app gebi ahaanba la xidhay. Dhab ahaantii, waxa la socda oo ku saabsan hab nasinta - app isticmaali doonaa qadar yar oo batari, xitaa ka sii badan haddii ay shilalka iyo laftiisa Banaadir. Si aad si buuxda u xirto app, double tuubada badhanka ugu weyn oo mari ilaa xiro barnaamijyadooda aan firfircooneyn.
Qaado Control of Screen ee Bright
Waxaad awoodi doontaa inaad naaqusto dhalaalka screen iPhone in Settings> dhalaalka & wallpaper , Haddii kale, ka hoose ee shaashadda guriga, mari up. Slider dhaqaaji inuu iska diido dhalaalka ee shaashadda. Waxa kale oo aad toggle karaa "Auto-dhalaalka" off halkan.
Gacanta cusboonaysiiso Apps
Tan iyo updates oo dhan ma u fiican yihiin in aad iPhone, gab muujinta ah automatic. Habkan, waxaa laguu xaqiijin karaa in aad iPhone la cusbooneysiin doonaa oo kaliya marka aad leedahay khayraad si ay u buuxiyaan aad iPhone ee batteriga. In sidaa la yeelo, madaxa si Settings> Lugood & App Store> Automatic Downloads> Updates .
Xaddid Background App Refresh
Horumarinta App jecel feature - waxa ay si toos ah Wararka barnaamijyadooda aad waqti u badan tahay inaad ku isticmaasho. Iyada oo ay tani kor u waayo-aragnimo isticmaala, waxaa gororinaysa badan oo batari, sababtoo ah iPhone-qaaduhu wuxuu ku saabsan barnaamijyada isagoo socda ee asalka ah. Dul Settings> General> Background App Refresh in gab feature gebi ahaanba ama soo qaado-iyo-dooran taas oo Apps inay isticmaalaan hawsha.
DHEH MAYA soo jeeda Mishiinkan iyo aragtida Zoom
Cool sida laga yaabaa in ay u muuqato, deselecting soo jeeda firfircoon idinka badbaadin doonaa, wax badan oo ka mid ah batariga. Eekow soo jeeda guurto ah oo fudud oo waa inaad u wanaagsan. Tani waa isku mid ay saaxiib ugu fiican, zoom aragtida.
Noqo qof daacad ah, oo aan dhammaan farriimaha aad hesho waa muhiim. Waa sahlan tahay si loo kordhiyo aad iPhone ee nolosha batari by deminta farriimaha qaar ka mid ah. Waxaad samayn kartaa in Xarunta Wargelinta ( Settings> Xarunta Wargelinta ).
Raadi Cause ee kuleeylka
Si looga fogaado kulayl, hubi in aad qaadato iPhone ka baxay kiiska marka ay ku amraya. Waxa kale oo aad qaadan karto note of taas oo app in marka la isticmaalo, waxay keeni aad telefoon u kulayliso. Haddii aadan heli karin sababta, soo qaado iPhone dukaanka kuugu dhow Apple aad ka raadinaysid caawimaadda.
Sida aad computer, aad iPhone u baahan yahay inuu hadda ka dibna la demiyo. Waxay u baahan yahay waqti si aad yarayso oo laftiisa recharges. Waxaad ku samayn kartaa halka amraya telefoonka.
Noqda ee Wi-Fi
Ha aad Wi-Fi waqtiga oo dhan ku soo jeestay. Dhawrto firfircoonaan ku rajo si aad u hesho ugu horeeya ee furan si dhaqso ah daadi doonaa batteriga.
Sahlo Auto-xir fogaato
Ayaa si degdeg ah Auto-xir waxaa firfircoonaan, awood yar aad iPhone isticmaala inay ku hayaan shaashadda shiday iyo adeegyada kale ee socda. Si aad u dhigay saacadda, u tag Settings> General> Auto-xir .
Dadka qaarkood ayaa jecel in feature goolkii barbaraha ee ay iPhone. Si kastaba ha ahaatee, habkaani qabsiga music this isticmaasho wax badan oo ka mid ah batariga. Haddii aad wax kama qaba dhagaysiga muusigga "caadi ah", jeestay this off ( Settings> Music> EQ ) uu noqon doono faa'iido aad u weyn.
Yaree Telefoonada Gacanta
Waxaad hadda ka jawaabi kartaa baaqey in adiga oo isticmaaleya isticmaale Mac - waa wax aan isticmaali marar badan. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay gororinaysa nolosha batteriga. Sidaa darteed, waxaan uun habkaani marka aan aan xeedho iPhone dhow isticmaalaan.
Lahaanshaha aad iPhone ku gariiraan waa hab fiican si aad u hesho dareen, laakiin waxa uu u adeegsanayaa wax badan oo ka mid ah awoodda batariga in ay kiciyaan hab motor ka. Isku day in aadan u isticmaali waqtiga oo dhan - kaliya u isticmaali markii aad leedahay telefoonka ku aamusan noqon lahaa ku filan.
> Resource > iPhone > iPhone Battery Fast geeriyooday: sababta iyo sida ay u badbaadi Waxaa